प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राम्रा वक्ता त हुन् नै साथै उत्तिकै राम्रो ‘ड्रेस’ छनौट गर्ने नेता मानिन्छन् । उनी अवसरअनुकूल हुने गरी कपडाको डिजाइन गराउँछन् । अचेल उनी एक नयाँ ‘लुक’ मा देखिँदैछन् । लामा दारी पालेका छन्, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोरको जस्तो ।
धेरै मान्छेलाई यो लाग्न थालिसकेको छ कि आगामी पश्चिम बंगाल चुनावलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो रुप धारण गरेका हुन् । यदि यसो हो भने प्रश्न उठ्छ के मोदीलाई मोदी नै भएर बंगाल जान डर लागेको हो ? के प्रधानमन्त्री मोदीलाई ममता बेनर्जीको त्यति ठूलो मनोवैज्ञानिक भय छ कि उनी मोदी कै ब्राण्डमा बंगालको चुनावी रणमैदानमा जान समेत हच्किरहेका छन् ?
बंगाली समाज आफ्नो संस्कृति र नवजागरणकालीन आफ्ना नायकहरूप्रति साँच्चै नै निक्कै भावुक छ । यसकारण स्वभाविक रुपले बंगाली चुनावमा बंगालको अस्मिता ठूलो चुनावी मुद्दा हुन्छ । ममता बेनर्जी बारम्बार बंगाली र बहिरियाको कुरा गरिरहेकी हुन्छिन् । मोदीलाई ममता दिदीको चुनौतिको राम्रो अनुभूति छ । यही कारण हुन सक्दछ– मोदी अचेल टैगोरको बान्कीमा देखिँदैछन् ।
मोदीको व्यक्तित्वको एक महत्वपूर्ण आयाम हो कि उनी अलगअलग समुदायका मानिससँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध जोडदार ढंगले देखाउन सक्दछन् । यस्तो देखिनका लागि कयौंपटक उनले हास्यास्पद लाग्ने काम पनि गरेका छन् ।
भाजपाले सन् २०१४ को चुनाव मोदी ब्राण्डमा जितेको थियो । हिन्दू हृदय सम्राटको छविलाई लुकाएर विकास पुरुषको ब्राण्डलाई प्रकट गरिएको थियो । मोदी ब्राण्डको अर्थ त्यतिखेर भारतलाई आर्थिक शक्ति बनाएर सबैको विकास गर्ने भन्ने थियो ।
त्यसपछिका कयौं विधानसभा चुनावहरू भाजपाले जित्यो । त्यसमा मोदी ब्राण्डको जादु चलेकै थियो । तर, यो कुरा पूर्ण सत्य भने थिएन ।
जुनजुन राज्यमा त्यसयता भाजपालाई अग्रता मिलेको छ, त्यहाँको आन्तरिक सर्वेक्षण अगाडि नै गरिएको हुन्छ । आन्तरिक सर्वेक्षणले भाजपाले जित्ने सम्भावना देखायो भने त्यहाँ मोदी आफैं प्रस्तुत हुन्छ्न । यदि त्यस्तो सम्भावना छैन भने कुनै स्थानीय नेताको अनुहार अगाडि सारिन्छ । कर्पोरेट मिडियाहरूले यसलाई मोदीको जितका रुपमा प्रचारित गर्दिन्छन् ।
जस्तो कि सन् २०१६ को असम विधानसभा चुनाव मोदी ब्राण्डमा लडियो । भाजपाले चुनाव जितेपछि सर्वानन्द सोनेवाललाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश सन् २०१७ को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पनि मोदी ब्राण्ड मै भयो तर आदित्यनाथ योगीलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । सन् २०१८ को त्रिपुरा चुनाव पनि मोदी ब्राण्ड मै भाजपाले जित्यो र विप्लव देव मुख्यमन्त्री बने ।
अर्कोतिरबाट हेर्दा सन् २०१५ को दिल्ली विधानसभा चुनावमा किरण बेदीलाई अगाडि सारिएको थियो । चुनावको अन्तिम समयमा आएर वेदी मुख्यमन्त्रीको प्रत्यासी घोषणा भइन् । दिल्लीमा भाजपा नराम्ररी हार्‍यो ।
त्यसै गरी सन् २०२० को दिल्ली विधानसभा चुनावमा पनि मोदीलाई मैदानमा ल्याइएन । यसपटक पनि भाजपाले नराम्रो हार सामना गर्नु पर्‍यो । सन् २०१८ का विधानसभा निर्वाचनमा छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश र राजस्थानको चुनावमा मोदीलाई अगाडि सारिएको थिएन । सन् २०१९ को झारखण्डमा पनि भाजपा हार्‍यो । यहाँ पनि मोदीको चेहरा कतै देखाइएको थिएन ।
यही कारण हो कि मोदी बंगालमा यावत प्रयत्नका बाबजुद आफ्नै अनुहार अगाडि सारेर चुनावमा जान डराइरहेका छन् । भाजपा ममताको विरुद्धमा भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सौरभ गांगुलीलाई उतार्न चाहिरहेको छ ।
भाजपाले अहिलेसम्म सौरब गांगुलीलाई आफूमा ल्याउन सफलता पाएको छैन । केही दिनअघि सौरभलाई हृदयघात भएको थियो । तृणमूल कांग्रेसको आरोप छ कि भाजपाको दवाबले गांगुलीलाई हृदयघात भएको हो । बंगालमा भाजपा आगामी चुनावको खेल मोदी भर्सेस् ममता हैन कि दिदी भर्सेस दादा खेल्न चाहन्छ । यो कुरा भाजपाका लागि कमजोरी सावित भएको छ ।
१० वर्षे शासनमा ममताले बंगाललाई बर्बाद गरेको आरोप भाजपाको छ । ममता एन्टी–इन्कम्बेन्सीको सामना गरिरहेकी छन् । निःसन्देह मान्छेमा ममता शासनप्रति एक प्रकारको निराशा छ ।
बंगालमा ३ दशकसम्म वामपन्थीहरूको सरकार रह्यो । यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रभाव थिए । जमिन्दारी उन्मुलन, साम्प्रदायिक सौहार्दता र राजनीतिक जागरुकता वामपन्थी शासनका देन थिए ।
यसका बाबजूद यो आलोचना थियो कि वामपन्थी सरकारले विकासका काममा ध्यान दिन सकेन । आज संसारभरि वैश्वीकरण, पुँजीवादीकरण, उदारीकरणको दौड छ, त्यो अवधिमा बंगाल यी प्रवृतिबाट अछुत जस्तै रह्यो र अन्य राज्यहरू भन्दा आर्थिक विकासमा धेरै पछाडि पर्‍यो ।
वामपन्थी सरकारका अन्तिम मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टचार्यले जब पुँजीवादी विकासका लागि ढोका खोले, तब त्यसको प्रतिक्रिया देखिनु स्वभाविक थियो । सिंगुरमा टाटा नानोको लागि जमिन अधिग्रहण गर्दा किसानहरू त्यसको विरुद्ध खडा भए । पुलिसले बर्बरतापूर्वक किसान आन्दोलन मदन गर्ने प्रयास गर्‍यो ।
यसैगरी पूर्व मेदनीपुरको नन्दीग्राम आसपासका क्षेत्रमा कृषिभूमि अधिग्रहणको विरुद्धमा किसान लामबन्द भए । ममता बनर्जीले त्यो समयका यी तमाम किसान आन्दोलन र जनताका मागमा साथ दिइन । फलतः जनसमर्थन ममताको पक्षमा गयो ।
ममताले वामपन्थी दमनको साटो जनताको सहभागितमा विकासको बाटो कोर्ने सपना देखाएकी थिइन् । बंगालमा जनताले दुई पटक ममतालाई पूर्ण बहुमत दिए । तर, जनतालाई देखाइएको सपना पुरा भएन । ममताका केही मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लाग्यो ।
अहिले यो भनिदैछ कि तृणमूल कांग्रेसमा परिवारवाद शुरुवात भएको छ । ममतामाथि यो आरोप छ कि उनका भतिजा अभिषेक बनर्जी पार्टी र नेताहरूमाथि हावी हुँदै गइरहेका छन् । यो कारण र प्रचारले ममताप्रति मान्छेमा बेखुशी बढ्दै छ ।
धेरैजसो पत्रकारहरू यही भन्दैछन् कि बंगालमा जनता फेरि परिवर्तन चाहन्छन् । परिवर्तनका लागि जनताले भाजपालाई एक अवसर दिन सक्नेछन् । तर ममताको जुझारुपनलाई भाजपाले कम आँक्न सक्दैन । कांग्रेसबाट राजनीतिक जीवनको शुरुवात गरेकी ममताले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोरले भनेजस्तै ‘एक्लै हिंड्ने यात्री नै अगाडि बढ्न सक्छ’ भन्ने पुष्टि गरिन ।
सन् १९९८ मा उनले तृणमूल कांग्रेस बनाइन् र बंगालको ३ दशक पुरानो वामपन्थी सरकारलाई चुनौती दिइन् ।
सन् २०११ को विधानसभा चुनावमा ममता बनर्जीले २९४ सिटमा १८४ सिट जितेर ३४ वर्ष पुरानो वामपन्थी सत्ता उखेलिन् । यो उनको संघर्षशील र जादुगरी व्यक्तित्वको कमाल थियो । सन् २०१६ को चुनावमा उनको सिट अझै बढेर २११ भयो ।
तर, सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले वामपन्थी दल र कांग्रेसलाई शिथिल बनाउँदै ममतालाई कडा टक्कर दियो । सन् २०१६ को विधानसभा निर्वाचनमा ३सीट मात्र जितेको भाजपाले लोकसभाका ४२ सीटमध्ये १८ सीटमा जित दर्ज गरायो ।
अहिले पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनका लागि भाजपाले आफ्नो पुरै ताकत होमेको छ । तर पार्टी मोदी ब्राण्डमा चुनाव लड्न अझै अनिच्छुक किन छ ? लोकसभा निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत मत बटुलेको भाजपा अझै ममतासँग डराइरहेको त हैन ?
कि बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा मोदी ब्राण्डको जादु चल्दैन भन्ने भाजपालाई लागेको छ ? भाजपालाई यदि यस्तो अनुभूति भएको हो भने बंगालमा ममतासँग मुकाबिला गर्न सक्ने अर्को चेहरा को हो त ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।